योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. स्वर्णीम वाग्ले, अमेरिकाको ५१ अर्व अनुदान स्वीकृत | Ekhabar Nepal
जेठ ६ २०७५
अर्थ साउन १९ २०७४ .
काठमाडौं,साउन १९– सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. स्वर्णीम वाग्लेलाई नियुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले बाग्लेलाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार राजीनामा दिनुभएको थियो । उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनु अघि उहाँ आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
कांग्रेसको सिफारिसमा लगातार दुई कार्यकाल सदस्य बनेका उनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएका हुन । वाग्लेले विश्व बैकको मुख्यालय वासिङटन डिसिमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा काम गरेका थिए । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा पनि उनीसँग नीति विश्लेषकको रुपमा काम गरेको अनुभव छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाको मिलिनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट ५१ अर्ब ३८ करोड अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम सडक यातायात र विद्युत प्रशारणामा ५ वर्षेभित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो
दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर : ९८१२/०७४-७५